အခဈြကို… ၁၅၀၀ အခဈြ နှငျ့ ၅၂၈ အခဈြဟူ၍ ဘာကွောငျ့ သတျမှတျ ချေါဆိုကွတာလဲ – Messi Club
အခဈြကို… ၁၅၀၀ အခဈြ နှငျ့ ၅၂၈ အခဈြဟူ၍ ဘာကွောငျ့ သတျမှတျ ချေါဆိုကွတာလဲ
အခဈြအကွောငျး ပွောကွမယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာလူမြိုး အမြားစုက “၁၅၀၀ အခဈြ” နဲ့ “၅၂၈မတ်ေတာ” ဆိုပွီး နှဈမြိုးခှဲပွောလေ့ ရှိကွတယျ။
သမီးရညျးစား အခဈြကို “၁၅၀၀ အခဈြ” ၊ ပူလောငျ ပွငျးပွတဲ့ အခဈြလို့ပွောပွီး မိဘတှရေဲ့ သားသမီးအပျေါခဈြတဲ့ အခဈြကိုတော့ “၅၂၈ မတ်ေတာ” ၊ အေးမွ ခမျြးမွတေဲ့ ခဈြခွငျး မတ်ေတာ ဆိုပွီး ယူဆ ပွောဆိုလေ့ ရှိပါတယျ။
ဘာလို့ (၁၅၀၀) ရှိနရေတာလဲ၊ (၅၂၈) ဆိုတာကကော ဘာလို့ ဖွဈလာရတာလဲ . .။
ပူလောငျတဲ့ အခဈြမို့ ၁၅၀၀ ရှိတာက ထားပါတော့… အေးမွတဲ့မတ်ေတာကမြှ ဘာလို့ ၅၂၈ ဆိုပွီး ကိုးလို့ ကနျ့လနျ့ လာဖွဈနရေ တာလဲ ( ၅၀၀ ဆိုပွီး ရှိနရေငျ ပိုတောငျ အေးမလားလို့လေ၊ နောကျ အစှနျးထှကျ ဂဏနျးလညျး မရှုပျဘူး)။
မထငျမှတျဘဲ ၁၅၀၀ / ၅၂၈ ဆိုတဲ့ ဂဏနျးတှေ ဘာလို့ အဲလို ဖွဈနေ ရတာလဲဆိုတာကို ဆရာမ “ဂြူး” ရေးတဲ့ “မြှျောလငျ့ခကျြနှငျ့ အခွားမကျြနှာဖုံးဆောငျးပါးမြား” စာအုပျလေး ဖတျလိုကျ ရမှ အဖွထှေကျ သှားတယျ။
အဲဒီ ၁၅၀၀ နဲ့ ၅၂၈ ဂဏနျးတှေ ဘယျလို ရလာသလဲဆိုရငျတော့ အောကျပါအတိုငျး ဖွဈပါတယျ…
(၁) ၁၅၀၀ အခဈြ (သမီးရညျးစားအခဈြ)
ကိလသောဆယျပါးကို အခွခေံတယျ။ အဲဒီ ကိလသောစိတျ (၁၀) ပါးကတော့ အောကျပါအတိုငျး ဖွဈပါ တယျ
၁။ လောဘ (တပျမကျခွငျး)
၂။ ဒေါသ (ကွမျးတမျးခွငျး)
၃။ မောဟ (တှဝေခွေငျး)
၄။ မာန (ထောငျလှားခွငျး)
၅။ ဒိဋ်ဌိ (မှားသော နှလုံးသှငျးခွငျး၊ အယူရှိခွငျး)
၆။ ဝိစိကိစ်ဆာ (အာရုံကို မဆုံးဖွတျနိုငျခွငျး)
၇။ ထိန (စိတျ၏ မခနျ့ခွငျး)
၈။ ဥဒစ်စ (စိတျ၏ မငွိမျသကျခွငျး၊ ပြံ့လှငျ့ခွငျး)
၉။ အဟီရိက (ကာယဒုစရိုကျ ပွုရခွငျး၌ မရှကျခွငျး)
၁၀။ အနောတ်တပ်ပ (ကာယဒုစရိုကျ ပွုရခွငျး၌ မလနျ့ခွငျး)
အဲဒီ ကိလသော(၁၀)ပါးကို ရုပျစုစုပေါငျးနဲ့ မွှောကျရပါတယျ။ ရုပျစုစုပေါငျးဆိုတာက… လက်ခဏာရုပျ (၄) ခု ၊ နိပ်ဖန်နရုပျ (၁၈) ခု ၊ နာမျ (၅၃) ပါး… ပေါငျးလိုကျရငျ (၇၅) ရပါတယျ။
အဲဒီ ရုပျစုစုပေါငျး (၇၅)ကို ကိလသော(၁၀)ပါး နဲ့ မွှောကျတော့ ၇၅၀။ အဲဒီမှာမှ အဇ်ဈတ်တ သဏ်ဍာနျ၊ ဗဟိဒ်ဓ သဏ်ဍာနျရယျလို့ နှဈပါးရှိတဲ့အတှကျ (၂)နဲ့ ထပျမွှောကျတော့ ၁၅၀၀ ရတာပါပဲ။
အတိုကောကျကတော့ ဒီလိုလေးပါ… ( ကိလသော (၁၀) ပါး x ရုပျစုစုပေါငျး (၇၅) ) x ၂ = ၁၅၀၀ အခဈြ
(၂) ၅၂၈ မတ်ေတာ (မိဘတို့၏ အခဈြ)
မတ်ေတာဆိုတဲ့အတိုငျး မတ်ေတာပို့ရာမှာ ရှိသငျ့ရှိအပျတဲ့ စိတျသဘာဝ တဈခုပါပဲ။ မတ်ေတာပို့ရာမှာ ပုဂ်ဂိုလျ (၁၂) ယောကျကို ပို့ပါတယျ။
(၁) သဗ်ဗသေတ်တာ၊ (၂) သဗ်ဗပေါဏာ၊ (၃) သဗ်ဗဘေူတာ၊(၄) သဗ်ဗပေုဂ်ဂလာ၊ (၅) သဗ်ဗအေတ်တဘာဝ ပရိယပ်ပန်န၊ (၆) သဗ်ဗက်ေကိထိယော၊ (၇) သဗ်ဗပေုရိသာ၊ (၈) သဗ်ဗအေရိယာ၊ (၉) သဗ်ဗအေနရိယာ၊ (၁၀) သဗ်ဗဒေဝေါ၊ (၁၁) သဗ်ဗမေနုဿာ၊ (၁၂) သဗ်ဗဝေိနိပါနိကာ တို့ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ ပုဂ်ဂိုလျ (၁၂)ပါးကို မတ်ေတာ(၄)ပါးပို့ပါတယျ၊ “အဝရောဟောန်ုတ၊ အဗြာဘစ်ဆာဟောန်ုတ၊ အနီဃာ ဟောန်ုတ၊ သုခိအတ်တာနံ ပရိဟရန်ုတ၊” တဲ့… ဒီတော့ ( ၁၂ x ၄ = ၄၈ ရပါမယျ)။
ဒါက အရပျမကျြနှာ အမညျ မတပျဘဲ (မရညျမှနျးဘဲ) ပို့တဲ့ “အနောဒိတ်တာ” မတ်ေတာအပါး လို့ ဆိုပါတော့ ။ အဲဒါကိုမှ ထပျပွီး အရပျမကျြနှာတှနေဲ့ အမညျတပျပွီး ထပျပို့ ပါတယျ၊ အရပျ (၁၀)မကျြနှာ ရှိပါတယျ…
အရှေ့၊ အနောကျ၊ တောငျ၊ မွောကျ ဆိုတဲ့ အရပျ (၄) မကျြနှာ။ အရှတေ့ောငျ၊ အနောကျမွောကျ ဆို့တဲ့ ထောငျ့ (၄) မကျြနှာ။ အထကျနဲ့ အောကျ (၂) မကျြနှာ ။
အဲဒီ အရပျမကျြနှာတပျ ရညျမှနျးမှု့(၁၀)ခု နဲ့ စောစောက (၄၈) ကို မွောကျလိုကျတော့ (၄၈၀)ရပါတယျ၊
အဲဒီ ရလာတဲ့ (၄၈၀) ကိုမှ ပထမဆုံး မရညျမှနျးဘဲ ပို့ထားတဲ့ မတ်ေတာအပါး (၄၈) ပါးကို ထပျပေါငျးကွညျ့ လိုကျတော့ (၅၂၈) ရယျလို့ ဖွဈလာပါတယျ။
အတိုကောကျ ကတော့ ဒီလိုလေးပါ… ပုဂ်ဂိုလျ (၁၂) ယောကျ x မတ်ေတာ(၄)ပါး = ၄၈ [ မရညျမှနျးဘဲပို့သော မတ်ေတာအပါး](၄၈ x အရပျ (၁၀) မကျြနှာ ) + ၄၈ [ မရညျမှနျးဘဲ ပို့သော မတ်ေတာအပါး] = ၅၂၈ မတ်ေတာ
၁၅၀၀ အခဈြနဲ့ ၅၂၈ ကိုတော့ သိပါပွီ… ဒါပမေယျ့ ဘယျသူတှမှောမြား (၅၂၈) မတ်ေတာကို ထားနိုငျမလဲ မသိတော့ပါ။
မိဘတှအေနနေဲ့ သားသမီးတှကေို ခဈြတဲ့အခဈြဟာ (၅၂၈)လိုိ့ မသခြောပါဘူး (မဟုတျဖို့ မြားပါ တယျ)။ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ (၅၂၈) ဟာ အရမျး မွငျ့မွတျလှနျး နလေို့ပါ၊
ဆရာမ “ဂြူး” ကတော့ (၅၂၈) မတ်ေတာရဲ့ သဘာဝကို မွတျစှာဘုရားက တပညျ့သာဝက ရဟနျးတှေ အပျေါထားတဲ့ မတ်ေတာမှာပဲ တှရေ့တယျလို့ ရေးထားပါတယျ။
အချစ်ကို… ၁၅၀၀ အချစ် နှင့် ၅၂၈ အချစ်ဟူ၍ ဘာကြောင့် သတ်မှတ် ခေါ်ဆိုကြတာလဲ
အချစ်အကြောင်း ပြောကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး အများစုက “၁၅၀၀ အချစ်” နဲ့ “၅၂၈မေတ္တာ” ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲပြောလေ့ ရှိကြတယ်။
သမီးရည်းစား အချစ်ကို “၁၅၀၀ အချစ်” ၊ ပူလောင် ပြင်းပြတဲ့ အချစ်လို့ပြောပြီး မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ချစ်တဲ့ အချစ်ကိုတော့ “၅၂၈ မေတ္တာ” ၊ အေးမြ ချမ်းမြေ့တဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ဆိုပြီး ယူဆ ပြောဆိုလေ့ ရှိပါတယ်။
ဘာလို့ (၁၅၀၀) ရှိနေရတာလဲ၊ (၅၂၈) ဆိုတာကကော ဘာလို့ ဖြစ်လာရတာလဲ . .။
ပူလောင်တဲ့ အချစ်မို့ ၁၅၀၀ ရှိတာက ထားပါတော့… အေးမြတဲ့မေတ္တာကျမှ ဘာလို့ ၅၂၈ ဆိုပြီး ကိုးလို့ ကန့်လန့် လာဖြစ်နေရ တာလဲ ( ၅၀၀ ဆိုပြီး ရှိနေရင် ပိုတောင် အေးမလားလို့လေ၊ နောက် အစွန်းထွက် ဂဏန်းလည်း မရှုပ်ဘူး)။
မထင်မှတ်ဘဲ ၁၅၀၀ / ၅၂၈ ဆိုတဲ့ ဂဏန်းတွေ ဘာလို့ အဲလို ဖြစ်နေ ရတာလဲဆိုတာကို ဆရာမ “ဂျူး” ရေးတဲ့ “မျှော်လင့်ချက်နှင့် အခြားမျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးများ” စာအုပ်လေး ဖတ်လိုက် ရမှ အဖြေထွက် သွားတယ်။
အဲဒီ ၁၅၀၀ နဲ့ ၅၂၈ ဂဏန်းတွေ ဘယ်လို ရလာသလဲဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်…
(၁) ၁၅၀၀ အချစ် (သမီးရည်းစားအချစ်)
ကိလေသာဆယ်ပါးကို အခြေခံတယ်။ အဲဒီ ကိလေသာစိတ် (၁၀) ပါးကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ တယ်
၁။ လောဘ (တပ်မက်ခြင်း)
၂။ ဒေါသ (ကြမ်းတမ်းခြင်း)
၃။ မောဟ (တွေဝေခြင်း)
၄။ မာန (ထောင်လွှားခြင်း)
၅။ ဒိဋ္ဌိ (မှားသော နှလုံးသွင်းခြင်း၊ အယူရှိခြင်း)
၆။ ဝိစိကိစ္ဆာ (အာရုံကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း)
၇။ ထိန (စိတ်၏ မခန့်ခြင်း)
၈။ ဥဒစ္စ (စိတ်၏ မငြိမ်သက်ခြင်း၊ ပျံ့လွင့်ခြင်း)
၉။ အဟီရိက (ကာယဒုစရိုက် ပြုရခြင်း၌ မရှက်ခြင်း)
၁၀။ အနောတ္တပ္ပ (ကာယဒုစရိုက် ပြုရခြင်း၌ မလန့်ခြင်း)
အဲဒီ ကိလေသာ(၁၀)ပါးကို ရုပ်စုစုပေါင်းနဲ့ မြှောက်ရပါတယ်။ ရုပ်စုစုပေါင်းဆိုတာက… လက္ခဏာရုပ် (၄) ခု ၊ နိပ္ဖန္နရုပ် (၁၈) ခု ၊ နာမ် (၅၃) ပါး… ပေါင်းလိုက်ရင် (၇၅) ရပါတယ်။
အဲဒီ ရုပ်စုစုပေါင်း (၇၅)ကို ကိလေသာ(၁၀)ပါး နဲ့ မြှောက်တော့ ၇၅၀။ အဲဒီမှာမှ အဇ္ဈတ္တ သဏ္ဍာန်၊ ဗဟိဒ္ဓ သဏ္ဍာန်ရယ်လို့ နှစ်ပါးရှိတဲ့အတွက် (၂)နဲ့ ထပ်မြှောက်တော့ ၁၅၀၀ ရတာပါပဲ။
အတိုကောက်ကတော့ ဒီလိုလေးပါ… ( ကိလေသာ (၁၀) ပါး x ရုပ်စုစုပေါင်း (၇၅) ) x ၂ = ၁၅၀၀ အချစ်
(၂) ၅၂၈ မေတ္တာ (မိဘတို့၏ အချစ်)
မေတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်း မေတ္တာပို့ရာမှာ ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ စိတ်သဘာဝ တစ်ခုပါပဲ။ မေတ္တာပို့ရာမှာ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ယောက်ကို ပို့ပါတယ်။
(၁) သဗ္ဗေသတ္တာ၊ (၂) သဗ္ဗေပါဏာ၊ (၃) သဗ္ဗေဘူတာ၊(၄) သဗ္ဗေပုဂ္ဂလာ၊ (၅) သဗ္ဗေအတ္တဘာဝ ပရိယပ္ပန္န၊ (၆) သဗ္ဗေက္ကိထိယော၊ (၇) သဗ္ဗေပုရိသာ၊ (၈) သဗ္ဗေအရိယာ၊ (၉) သဗ္ဗေအနရိယာ၊ (၁၀) သဗ္ဗေဒေဝါ၊ (၁၁) သဗ္ဗေမနုဿာ၊ (၁၂) သဗ္ဗေဝိနိပါနိကာ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂)ပါးကို မေတ္တာ(၄)ပါးပို့ပါတယ်၊ “အဝေရာဟောန္တု၊ အဗျာဘစ္ဆာဟောန္တု၊ အနီဃာ ဟောန္တု၊ သုခိအတ္တာနံ ပရိဟရန္တု၊” တဲ့… ဒီတော့ ( ၁၂ x ၄ = ၄၈ ရပါမယ်)။
ဒါက အရပ်မျက်နှာ အမည် မတပ်ဘဲ (မရည်မှန်းဘဲ) ပို့တဲ့ “အနောဒိတ္တာ” မေတ္တာအပါး လို့ ဆိုပါတော့ ။ အဲဒါကိုမှ ထပ်ပြီး အရပ်မျက်နှာတွေနဲ့ အမည်တပ်ပြီး ထပ်ပို့ ပါတယ်၊ အရပ် (၁၀)မျက်နှာ ရှိပါတယ်…
အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် ဆိုတဲ့ အရပ် (၄) မျက်နှာ။ အရှေ့တောင်၊ အနောက်မြောက် ဆို့တဲ့ ထောင့် (၄) မျက်နှာ။ အထက်နဲ့ အောက် (၂) မျက်နှာ ။
အဲဒီ အရပ်မျက်နှာတပ် ရည်မှန်းမှု့(၁၀)ခု နဲ့ စောစောက (၄၈) ကို မြောက်လိုက်တော့ (၄၈၀)ရပါတယ်၊
အဲဒီ ရလာတဲ့ (၄၈၀) ကိုမှ ပထမဆုံး မရည်မှန်းဘဲ ပို့ထားတဲ့ မေတ္တာအပါး (၄၈) ပါးကို ထပ်ပေါင်းကြည့် လိုက်တော့ (၅၂၈) ရယ်လို့ ဖြစ်လာပါတယ်။
အတိုကောက် ကတော့ ဒီလိုလေးပါ… ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ယောက် x မေတ္တာ(၄)ပါး = ၄၈ [ မရည်မှန်းဘဲပို့သော မေတ္တာအပါး](၄၈ x အရပ် (၁၀) မျက်နှာ ) + ၄၈ [ မရည်မှန်းဘဲ ပို့သော မေတ္တာအပါး] = ၅၂၈ မေတ္တာ
၁၅၀၀ အချစ်နဲ့ ၅၂၈ ကိုတော့ သိပါပြီ… ဒါပေမယ့် ဘယ်သူတွေမှာများ (၅၂၈) မေတ္တာကို ထားနိုင်မလဲ မသိတော့ပါ။
မိဘတွေအနေနဲ့ သားသမီးတွေကို ချစ်တဲ့အချစ်ဟာ (၅၂၈)လိုိ့ မသေချာပါဘူး (မဟုတ်ဖို့ များပါ တယ်)။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ (၅၂၈) ဟာ အရမ်း မြင့်မြတ်လွန်း နေလို့ပါ၊
ဆရာမ “ဂျူး” ကတော့ (၅၂၈) မေတ္တာရဲ့ သဘာဝကို မြတ်စွာဘုရားက တပည့်သာဝက ရဟန်းတွေ အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာမှာပဲ တွေ့ရတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။